Soo dejisan Multiple Search and Replace 6.1 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaMultiple Search and Replace
Bogga rasmiga ah: Multiple Search and Replace
Raadinta Badan iyo Bedelka – software si aad u raadiso una bedesho qoraalka isku mid ah faylal badan. Nidaamku wuxuu raadin karaa oo beddeli karaa xogta faylasha faylasha ee Microsoft, Dukumiintiga Furan, Faylasha boggaga kaydsan, PDF, RTF, iyo sidoo kale faylasha ZIP, RAR, TAR iyo GZIP. Raadinta iyo beddelaad badan ayaa bixiya fursado kala duwan oo loogu talagalay raadinta qoraalka intaba ka hor inta aad ku cadeyn karto cabbirka faylka, taariikhda abuuritaanka ama isbeddelka ugu dambeeya, lambarka bogga, hantida feylka iwm. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho tibaaxyada joogtada ah Raadi, oo raadi xariiqda qoraalka si aad u habayso, ku darto qoraalka ka hor ama ka dib xarigta la helay, nadiifi ama tirtir khadka oo dhan. Raadinta Badan iyo Bedelka waxay taageertaa raadinta qoraalka ee qaybaha la cayimay iyo sidoo kale waxay awood u yeelaneysaa in laga reebo qaybaha qaarkood ama dhammaan sheekooyinka laga soo bilaabo nidaamka raadinta ee doorashooyinka iyo nidaamyada hore.
Raadinta iyo bedelida qoraalka faylal badan
Ka raadi xuduudaha iyo xeerarka
Muujinta macnaha guud iyo khadka natiijada raadinta
Saamaynta natiijooyinka raadinta
Kala soocista faylasha
Soo dejisan Multiple Search and Replace
Cadaadiska bilaashka ah ee PDF – waa adeegsiga fududahay in la istcimaalo iskudhiska xogwaran ee faylasha PDF iyadoo loo marayo Windows Explorer ama adoo jiidaya oo u ridaya faylalka barnaamijka.
Faallo ku saabsan Multiple Search and Replace
Multiple Search and Replace Xirfadaha la xiriira
Adobe AIR – bii’ad si ay u fuliso adeegyada webka ayadoon la isticmaalin biraawsar. Software-ka wuxuu taageeraa shaqada barnaamijyada, cayaaraha iyo aaladda si kor loogu qaado waxqabadka.
Darawalka darawalnimada ah – softiweer si loo casriyeeyo noocyada darawalka waqtigiisu burburay ama burburay ee nidaamka iyo codsiyada kala duwan. Sidoo kale, softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu keydiso wadayaasha shaqsiga ah.
Tool aad ku qorshayso iyo reserved qalabka elegtarooniga ah. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan wareeg ah Tifaftiraha graphic iyo si ay u qabtaan imtixaanka.
Kombuyuutarka Comodo – fayraska wuxuu taageeraa teknoolojiyadda falanqaynta dabeecadda iyo nidaamka kahortagga qasitaanka si wax ku ool ah loo ogaado loona xakameeyo khataraha kala duwan.
FFDShow – waa aalad loo codeeyo, lagu cadaadiyo ama lagu socodsiiyo faylalka maqalka iyo fiidiyowga ah. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato noocyada codeode ee la doonayo wuxuuna la shaqeyn karaa cinwaan hoosaadyo.